कोरोना संक्रमण : कुन उमेर समूह कति जोखिममा ? - Grameen Khabar
कोरोना संक्रमण : कुन उमेर समूह कति जोखिममा ?
२०७७ भाद्र २१, आईतवार ०७:५८
केवल आठ महिनाको अन्तरालमा, कोभिड– १९ को महामारीले विश्वमा दुई करोड ५६ लाखभन्दा बढीलाई संक्रमण गराएर आठ लाख ५९ हजारजतिको मृत्यु गराइसकेको छ ।
नेपालमा पनि संक्रमण फैलिँदै गएर ४० हजारभन्दा बढीलाई संक्रमण गराई दुई सय ३९ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । कोरोनाले विश्वको जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई आक्रान्त पारेको छ । महाव्याधिबाट प्रभावित नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुक बढी नै अस्तव्यस्त बनेका छन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका महिला र पुरुषमा मृत्युदर कस्तो छ ? कुन उमेर समूह बढी जोखिममा छन् ? पछिल्लो समय चासोका विषयमाथि नेपालको कोरोनाको तथ्यांकको चिरफार, तुलानात्मक मूल्यांकन र विश्लेषणको लेखाचित्र यहाँ प्रकाश पार्न खोजेको छु ।
हालसम्म, नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ०७७ जेठ २ मा पहिलो मृत्यु भएयताको करिब सय दिनको अन्तरालमा दुई सय ३९ मृत्युका घटनाहरू दर्ज भएका छन् । अहिलेसम्म कुल संक्रमणमा ०.५९ प्रतिशत मृत्युदर छ ।
नेपालमा साउन महिनाको पहिलो हप्तापछि कोरोना संक्रमणबाट मृत्युका घटनाहरू पाँच गुणाले वृद्धि भएको आंकडाले देखाउँछ । यसले पक्कै पनि अबको परिस्थितिको गाम्भीर्यताको संकेत गर्छ । साउन महिनापछि मृत्युको वक्ररेखा रकेटझैँ सीधै माथि उक्लिएको छ ।
सोमबार १२ सय २१ संक्रमित थपिएको दिन १४ जनाको मृत्यु भएको छ । हाल कोरोनाबाट विश्वव्यापी मृत्युदर ३.३६ प्रतिशतमा छ । जसमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानको ३.६७ प्रतिशत, पाकिस्तानको २.१२ प्रतिशत, भारतमा १.८ प्रतिशत र बंगलादेशमा १.३६ प्रतिशत पुष्टि भएको छ ।
नेपालको विगत एक हप्ताको कोरोना संक्रमण पुष्टि मृत्युदरले बंगलादेशको मृत्युरदरलाई पछ्याइरहेको ट्रेन्ड देखाएको छ । तर, नेपालमा पछिल्लो समय संक्रमण समुदायस्तरमा फैलँदै गएकाले अब कमजोर समूह (दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा आदि) संक्रमित हुन थालेका छन् । यसबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ । विशेष सावधानी अपनाएर कमजोर समूहलाई संक्रमण जोगाउन सकिएन भने ठण्डीको मौसममा नेपालमा कोरोनाले अझ बढी प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपालमा हालसम्मको कोरोनाको संक्रमण अध्ययन र विश्लेषण गर्दा, कुल संक्रमितमा २१.४ प्रतिशत महिला छन् भने ७८.६ प्रतिशत पुरुष छन् । शायद नेपाली महिलाभन्दा बढी पुरुष काम, जागिर र अरू कामको सिलसिलामा घरबाहिर हुने हुँदा कोरोनाको संक्रमणको जोखिममा बढी देखिएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । कुल कोरोना मृत्युको घटनामा एकचौथाइ महिला छन् ।
त्यसैगरी, उमेर समूहको आधारमा हेर्दा २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति सबैभन्दा बढी संक्रमणमा परेका छन् । जुन कुल संक्रमितको एकतिहाइभन्दा बढी छ । यद्यपि यो उमेर समूहमा अरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा मृत्युदर निकै कम छ । युवा उमेरमा कोरोनासँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च हुने भएकाले मृत्युदर कम भएको अनुमान छ । ३१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति कुल संक्रमितको एकचौथाइ छन् । यो उमेर समूहमा पनि तुलनात्मक रूपमा कम मृत्युदर छ । अहिलेसम्म कुल संक्रमितमा ११ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत छन् ।
तर, असी वर्षभन्दा माथिको उमेरका वृद्धवृद्धामा सबैभन्दा उच्च मृत्युदर (१२ प्रतिशत) देखिएको छ, जसमा पुरुषमा १४ प्रतिशत र महिलामा आठ प्रतिशतको मृत्युदर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । ७० देखि ८० वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा पनि आंकडाले मृत्युदर ६ प्रतिशत देखाएको छ, जसमा पुरुषको मृत्युदर नाै प्रतिशत र महिलाको मृत्युदर करिब तीन प्रतिशत छ । यसबाट महिलाको तुलनामा पुरुषमा मृत्युदर बढी रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, ६० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा पनि आंकडाले तुलनात्मक रूपमा केही बढी मृत्युदर रहेको देखाउँछ । यो समूहमा मृत्युदर चार प्रतिशत रहेको छ । यो उमेर समूहमा भने पुरुष र महिला मृत्युदरमा केही समानता पाइएको छ । ५० देखि ६० वर्ष उमेर समूहको मृत्युदर आंकडाले १.६ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । तुलनात्मक रूपमा साठी वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा कोरोनाको मृत्युको जोखिम बढी देखिएको छ । जसलाई ६० वर्षभन्दा कम उमेर समूहको मृत्युदरसँग तुलना गर्दा उल्लेखनीय भिन्नता पाइएको छ ।
नेपालको उमेर समूहको कोरोना संक्रमित मृत्युदर विश्व स्वास्थ्य संगठन र चीनले गरेको फेब्रुअरी २८, २०२० को संयुक्त अध्ययनसँग लगभग मिलेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र चीनको अध्ययनले भिन्न उमेर समूहमा मृत्यु हुनेको दर जुन पाएको छ नेपालका तथ्यांकले पनि लगभग मृत्युको त्यही दर देखाउँछ । अर्थात्, विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट जुन दरमा मानिसको मृत्यु भएको छ नेपालमा पनि त्यही दर र संख्यामा मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना उच्च छ । यसर्थ, अब बढ्न सक्ने मृत्युको संख्यालाई कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिन ढिला हुन थालिसकेको छ ।
नेपालको कोरोनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ५० वर्ष वा कम उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा भन्दा ५० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा मृत्युको जोखिम लगभग १२ गुणा बढी देखिएको छ । र, तुलना गर्दा उल्लेखनीय भिन्नता (लेवल अफ सिग्निफिकेन्स) पाइन्छ ।
माथिका तथ्य र विविध पक्षहरू केलाउँदा, कोरोनाको पुष्टि भएका ७० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा गम्भीरता र मृत्युको जोखिम उच्च हुने हुँदा अति संवेदनशील भएर कोरोना प्रसारण र संक्रमणको रोकथामलक्षित सुरक्षा नीतिहरू कडाइका साथ पालना गरी यो समूहलाई जोगाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । ८० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका वृद्धवृद्धालाई अझै विशेष हेरचाह हुनुपर्ने तथ्यांकको विश्लेषणले पुष्टि गर्छ । वृद्धवृद्धामा तुरुन्तै कोरोनाको परीक्षण र निदान गर्नुका साथै केही गरी संक्रमित भइहाले उचित आइसोलेसनको व्यवस्थापन तथा यथाशीघ्र अस्पतालमा उपलब्ध आपतकालीन सहयोगी उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अब, यी उमेर समूहका मानिसलाई कसरी हेरचाह गर्ने, संक्रमण हुनबाट घरमा कसरी जोगाउने, भइहाले के गर्ने जस्ता पक्षमा छुट्टै योजना निर्माण गरी अघि बढ्न आवश्यक छ ।
(आनन्दवन अस्पतालस्थित कोभिड– १९ डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाका प्रमुख तथा अनुसन्धान वैज्ञानिक डा. दुलालले अमेरिकाबाट विद्यावारिधि तथा पोस्ट–डक्टरल फेलोसिप गरेका छन्। )
कोरोना संक्रमणबारे यी तीन तथ्य आत्मसात गरौं